Silva Oo Soo Dhoweeyey In Uu Amaah Kaga Tago Real Madrid
HomeWararka MaantaSilva Oo Soo Dhoweeyey In Uu Amaah Kaga Tago Real Madrid
Saddex bilood ka hor ayuun buu ku biiray Lucas Silva kooxda Madrid ka dhisan ee Real, laakiin waxa markiiba lala xidhiidhiyey in uu ku biirayo kooxo kale. Laacibkan khadka dhexe ee reer Brazil waxa uu xulka dalkiisa ee Olympic-ga u ciyaaray kulan saaxiibtinimo oo ay la yeeshee Paraguay iyo Mexico, laakiin wararka soo baxaya ayaa sheegaya in uu ka tegayo caasimadda Madrid oo uu u wareegayo wadanka Portugal oo uu sannadka dambe u ciyaari doono FC porto.
Markii ay toddobaadkii hore soo baxeen wararkan, ayaa waxa ay warbaahintu u tagtay Lucas Silva, kaas oo ay weydiiyeen sida uu u arko wararkaas, waxaanu sheegay in uu aad u soo dhoweynayo.
Silva oo arrintaas ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Waan la yaabay warkaas, sababtoo ah aniga wali waxba imay soo gaadhin. Heshiis ayaan kula jiraa Real Madrid waxaanan doonayaa in aan dhamaystiro. Mar horeba waxa ay kooxdu isiisay fursado waxayna ila tahay in aan buuxin doono uun shuruudaha kooxda oo aan ciyaari doono.”
Lucas Silva oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Cruzeiro eek a dhisan dalka Brazil, mana uu xidhin suurtogalnimada in uu amaah kaga tago kooxdiisa, isaga oo waliba soo dhoweeyey in haddii aanay kooxdu u helaynin boos joogto ah in uu jecel yahay in amaah lagu siiyo. Wararku waxay u badinayaan in uu tegi doono FC Porto oo uu ku sugan yahay laacibka khadka dhexe ee reer Brazil ee Casemiro, kaas oo ay Real Madrid amaah ku bixisay xagaagaas hore.
Silva waxa uu sheegay in ay u fiicnaan lahayd in uu ku biiro Porto, laakiin ay arrintu u taallo kooxdiisu in ay go’aan ka gaadho.
Lucas Silva ayaa ku biiray Real Madrid saddex bilood ka hor, waxaanu illaa hadda u ciyaaray 6 kulan oo 3 ka mid ah uu ka mid noqday kooxda koowaad.